यी हुन् यौन सम्पर्कका बेला हुने चार परिर्वतन | Hamro Doctor News
शुक्रबार, १३ बैशाख २०७६ /
यी हुन् यौन सम्पर्कका बेला हुने चार परिर्वतन
मानव जीवनका लागि सेक्स अर्थात यौन महत्वपूर्ण कुरा हो ।
संसारमा सबै भन्दा धेरै लुकाइएको र खोजिएको विषय पनि यौन नै हो । यसकारण यौनका बारेमा धेरै मानिस जानकार छन् तर उनीहरू पूर्ण जानकार छैनन् । किनकी यौन अर्थात सेक्स बारे निरन्तर अध्ययन अनुशन्धान भइरहेको छ । अनुशन्धानकै क्रममा सेक्स थेरापिष्ट मास्टर्स एन्ड जोनसन्सले यौन सम्पर्कका बेला मानव शरीरमा हुने चार परिर्वतन बारे नयाँ तथ्य सार्वजनिक गरेका छन् । जोनसन्सले यसलाई सेक्सुअल रिस्पोन्स साइकल नाम दिएका छन् ।
जानौं यौन सम्पर्कका बेला पार गरिने चार अवस्था :
योे फेज भनेको उत्तेजनाको अवस्था हो । यस अवस्था कुनै पनि समय शरीरको कुनै पनि भागमा, आधा–आधा मिनटमा सुरु हुन सक्छ । यसमा पुरुषको गोप्य अंग र महिलाको निप्पल्स इरेक्ट हुनसक्छ । त्यस्तै महिलामा फ्लूइड फ्लो हुन थाल्छ । महिलाको यौनांग, क्लिटरिस र ब्रेस्टको आकार पनि बढ्न थाल्छ । महिला, पुरुष दुवैमा ब्लड प्रेसर र मुटुको गति बढ्न थाल्छ ।
यो अवस्थामा पुरुषको गोप्य अंग पूर्ण रुपमा इरेक्ट हुन्छ । उसको टेस्टिस स्क्रोटमको दिशामा जान्छ । त्यस्तै महिलामा योनीको बाह्य र भित्री भाग फुल्नन थाल्छ । महिला र पुरुष दुवैको हात, तिघ्रा र हिप्सको मांसपेसीमा तनाव उत्पन्न हुन्छ ।
चार वटै अवस्था मध्ये यो सबैभन्दा छोटो फेज हो । यो फेज केही सेकेन्ड मात्रै चल्छ । पुरुषमा उसको यूरेथ्रल बल्बमा फ्लूइड महसूस हुन्छ । त्यसपछि फ्लूइडले सिमेन डिस्चार्ज गरिदिन्छ र निजी अंगमा कन्ट्र्याक्सन आउँछ । यही समय महिलाको योनीमा रिदमिक कन्ट्र्याक्शन अनुभव हुन्छ् । आठ सेकन्डमा औसत १० रिदम हुन्छ । पुरुषलाई यूटेरसको मांसपेशीमा कन्ट्र्याक्सन अनुभव हुनसक्छ । दुवैजनामा कैयौं पटक यौन अंगका साथै हात र खुट्टाको मांसपेशीमा रिफ्लेक्स हुन्छ ।
योे अवस्था भनेको क्लाइमेक्सको हो र डेढ घण्टासम्म चल्छ । विशेषगरी महिलामा । पुरुषको गोप्य भाग लुज भएर जान्छ र त्यसपछि उसलाई दोहोर्याएर ओर्गज्म पाउन गाह्रो हुन्छ । महिलाको यूटेरस र क्लिटरिस पुरानो अवस्था फर्कन्छ । दुवै जनाको शरीरको तनाव कम भएर जान्छ ।
मस्तिष्कमा पनि हुन्छ परिवर्तन
यौन सम्पर्कका लागि शरीरमा मात्रै होइन मस्तिष्कमा पनि परिवर्तन आउँछ । महिलामा कर्टेक्सको विभिन्न भाग एक्टिभेट हुन जान्छ । उसो त महिला–पुरुष दुवैमा यी चार वटै अवस्था एकसाथ हुँदैन । तर, एकै साथ ओर्गज्म अप्ठ्यारो हुन्छ । महिलामा पुरुषको भन्दा बढी समय लाग्न सक्छ ।
Last modified on 2018-11-25 09:06:23
पाठेघरमा मासु पलाएको कसरी थाहा पाउने ?
काठमाडौं, १३ वैशाख । धेरै महिलामा पाठेघरमा मासु पलाउने समस्या देखिने गरेको छ । यसरी...
चार वर्षमा कहाँ पुग्याे स्वास्थ्य संस्था पुनर्निर्माण ?
काठमाडौं १२ वैशाख । ०७२ को भूकम्पले भत्काएका स्वास्थ्य संस्था चार वर्षसम्म पनि...
गुल्मीमा दूषित पानी पिउँदा ६० जना बिरामी, एकजना गम्भीर
रुपन्देही १२ वैशाख । गुल्मीको मुसिकोट नगरपालिका वडा नं ४ मा दुषित...
औलोको खोप अभियान सुरु, कुन-कुन देशबाट हुँदैछ ?
बिबिसी, काठमाडौं । औलोबाट बालबालिकालाई आंशिक रूपमा जोगाउने उद्देश्यसहित एउटा नमुना खोप...
नेपालमा औलोका बिरामी १२ सय, कैलालीमा मात्रै ७० प्रतिशत
यौन सन्तुष्टिका लागि लिंगको आकार कत्रो ?
यौन सम्बन्धको सुरुवातपछि महिलामा हुन्छ यस्ता परिवर्तन...
पीरियड्सको बेला सेक्स गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ ? यी कुरा ध्यानमा राख्नुहोस्
छिटो-छिटो रिस उठ्ने समस्याले हैरान हुनुहुन्छ ? त्यसो भए यसो गर्नुस्
स्वास्थ्यका आठ ट्रेड युनियनले देखाए समायोजनमा आठ त्रुटि, पुन: समायोजनको माग
छारे रोगबाट यसरी बच्न सकिन्छ: डा‍. राजु पाैडेल
आयुर्वेदिक उपचार पिनासका लागि प्रभावकारी
टन्सिलाइटिसबाट यसरी बच्न सकिन्छः डा. पवित्रा लिम्बु
खाडी मुलुकमा जाने मानिसलाई किन मिर्गाैला रोग बढी लाग्छ ?